भिडियो – Himalaya Television
१ जेठ २०७८ काठमाडौं । यस वर्ष कोरोना सक्रमणले अर्थतन्त्रलाई ठुलो असर गरे पनि वैशाखसम्म राजस्व संकलन सन्तोषजनक रुपमा संकलन भएको छ । महालेखा लेखा नियन्त्रक कार्यलयको वैखाशसम्ममाको कुल राजस्व संकलनलाई हेर्ने हो भने सरकारले लिएको लक्ष्यको ७५ प्रतिशत...
२९ वैशाख २०७८ काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दिएको तीन दिने समयसीमाभित्र संयुक्त सरकार बन्न नसके संविधानका अन्य धारा सक्रिय हुनेछन् । त्यस्तो अवस्थामा के होला त ? वैशाख ३० गते राति ९ बजेसम्म दुई वा दुईभन्दा बढी दलले...
२० वैशाख २०७८ काठमाडौं । निषेधाज्ञा लगाउँदा पनि कोरोना संक्रमण नरोकिएको भन्दै सरकारले कडा खालको लकडाउन गर्ने तयारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै यसबारे जानकारी दिनुभएको हो । सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री ओलीले संक्रमणको...
१० वैशाख २०७८ काठमाडौं । सरकारले पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाको काममा सन्तोषजनक उपलब्धी हासिल गरेको दावी गरेको छ । पुनर्निर्माण प्राधिकरणले आज पत्रकार सम्मेलन गरेर आफूले गरेका कामको फेहरिस्त प्रस्तुत गरेको छ । भुकम्पपछिको ६ वर्षमा प्राधिकरणले के के गर्‍यो...
२५ चैत २०७७ काठमाडौं । प्रविधिको प्रयोग, पोषणतत्वको कमी र हेलचेक्रयाइका कारण बालबालिकामा हुने आँखाको समस्या बढ्दै गएको छ । समयमै उपचार गर्ने हो भने बालबालिकामा हुने दृष्टि समस्यामा कमी ल्याउन सकिन्छ । बालबालिकाको दृष्टिमा समस्या भयो भन्ने कसरी...
१६ चैत २०७७ काठमाडौं । नेपालका विभिन्न स्थानमा वायू प्रदुषण बढेसँगै मानिसमा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विभिन्न समस्या देखिन थालेको छ । वायू प्रदुषणका कारण उत्पन्न हुने समस्याबाट बच्न के गर्ने त ? चिकित्सकका सुझाव समेटिएको यो रिपोर्ट हेरौं– केही दिनदेखि...
११ चैत २०७७ काठमाडौं । कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि एक वर्षअघि लकडाउन शुरु गरेको दिन पारेर सरकारले आज आफ्नो कामको मूल्याकंन गर्दै दुईवटा पुस्तक विमोचन गरेको छ । लकडाउन र त्यसपछिका निषेधाज्ञाले समाज र अर्थतन्त्रमा परेको असरलाई बिर्सदैँ सरकारले...